Mgbasa Ozi - Ijikọta Oghere | Martech Zone
Mgbasa Ozi - Ijikọta Oghere
Tuesday, July 5, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweta obi nkoropụ na ha anabatabeghị mgbasa ozi mmekọrịta ma na-atụ egwu na ọ ga-egbu oge. Ahụrụ m Infographic n'anya ezigbo enyi, Jason Falls, n'ihi na ọ na-enye nghọta n'ezie ojiji… na eziokwu na a ka nwere ọtụtụ ohere maka ulo oru leverage elekọta mmadụ mgbasa ozi na-eto eto ha azụmahịa.
O kwuru… oge amalitewala. M na-atụ egwu na, n'ime afọ ole na ole, ụlọ ọrụ nwere ike ida òkè ahịa na ụlọ ọrụ ndị na-asọmpi nke nakweere mgbasa ozi ọha na eze dị ka usoro iji kwalite ma soro ndị ahịa ha na atụmanya ha. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ anaghị eme ihe n'oge na-adịghị anya, ha ga-ahụ onwe ha ntakịrị n'azụ ndị asọmpi ha ka ụlọ ọrụ ndị ahụ toro ikike na akara ha n'ịntanetị.
Dị ka Jason si kwuo, nzukọ ya dị maka ya nyere ụlọ ọrụ aka imeri ọdịiche ahụ. Hụ na ị gbakwunye ringchọgharị Social Media na ndepụta gị nke nnukwu agụ ma soro ezigbo enyi m Jason Falls na Twitter, kwa.
WordPress Mobile na WPtouch Pro
Ọ bụghị maka You